July 22, 2018 - TV Annapurna
जब अनसनस्थलमा डा केसीलाई भेट्न उनकी आमा पुगिन्…..
July 22, 2018 July 23, 2018 TV-Annapurna
डा गोविन्द केसीलाई भेट्न आइतबार राति उनकी आमा पुगेकी छिन्। तर त्रिवि शिक्षण अस्पतालको एउटा कोठामा अनसन बसिरहेका केसी सँग न उनकी आमा बोलीन् नत उनी नै बोल्न सके । अनसनस्थलमा सुतिरहेका छोरालाई देखेपछि आमा मित्रकुमारीका आँसु झरे। आमाको आँसु झरेपछि डा केसीको आँखा पनि रसाए। बहिनीसँग आएकी डा केसीकी आमाले करिब ५ मिनेट छोरालाई नियालिरहिन्। डा केसीले पनि आमालाई हेरेर आँसु झारिरहे, केही बोल्न सकेनन्। आमा – छोराका आँसु मात्र झरिरहेको देखेपछि डा केसीका सहयोगी, मेडिकल टिम समेत केही समय अवाक भएको थियो। छोरालाई हेर्न आएकी आमा मित्रकुमारीले बरबरी…
July 22, 2018 July 22, 2018 TV-Annapurna
वेगनास तालमा माछा मार्ने क्रममा डुबेर आज एकजनाको मृत्यु भएको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–१५, टुटुंगा बस्ने ३१ वर्षीय प्रकाश गुरुङ माछा मार्न जानेक्रममा पौडी खेल्दा अचानक डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी र स्थानीयको सक्रियतामा उद्धार गरी गण्डकी अस्पताल पु-याइएका गुरुङको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
असारको १ गते सेती नदीमा हाम फालेको घटनामा बाँचेका ८ वर्षका सुरेन्द्र बोहरा भाग्यले बाँचेका खुलेको छ । उनलाई सेती नदीमा माछा मारिरहेका ६० वर्षका धनबहादुर विकले आफ्नो नाति सम्झेर जोखिम मोल्दै नदी बीचबाट उद्धार गरेको आदर्श गाउँपालिका–४ का अध्यक्ष नारायण पछेराले बताए । असार १ गते डोटीको आदर्श गाँउपालिका बडा नं. ४ बस्ने बम वहादुर बोहराकीश्रीमती धौली बोहराले आफ्ना तीन सन्तानसहित सेती नदीमा हामफालेकी थिइन । बाँचेका सुरेन्द्रले बताए अनुसार सबैभन्दा पहिला धौलीले १२ वर्षकी छोरी राधिकाको हात समातेर सेतीमा फालेकी थिइन् । त्यसपछि सुरेन्द्रलाई फालेकी उनले अन्तमा ६ वर्षको छोरा…
July 22, 2018 July 23, 2018 Annapurna TV
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग भेट गरेका छन् । आइतबार साँझ त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर केसीलाई भेट गरेका श्रेष्ठले उनलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिन आग्रह गरेका छन् । जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याएदेखि स्वास्थ्य परीक्षण पनि नगरी बसेका केसीलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आग्रह गरेको श्रेष्ठले बताए । ‘तपाईका मुद्दा कुन ठीक, कुन बेठीक छलफल भइरहेको छ । तर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुस्’ श्रेष्ठले भनेका थिए । तर यस विषयमा डा. गोविन्द केसीले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर २३ दिनदेखि केसी आमरण अनसनमा…
July 22, 2018 July 26, 2018 TV-Annapurna
नेपालमा आफू अभिनीत चलचित्र त्यति नचलेर फुर्सदमा रहेकी सन् २०११ की मिस नेपाल तथा अभिनेत्री मलिना जोशी अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा हुने छैटौं मिस नेपाल यूएस–२०१८ कि आधिकारिक प्रशिक्षक नियुक्त भएकी छिन् । टेक्सासको ड्यालसमा आगामी अगस्ट १९ तारिखमा हुने उक्त कार्यक्रमका लागि मलिनालाई छनौट गरिएको जानकारी आयोजकहरूले नै सार्वजनिक गरेका हुन् । सन् २०१४ मा पनि मिस नेपाल यूएस को आधिकारिक प्रशिक्षक भैसकेकी मलिना एसियन पेन्ट्सकी ब्रान्ड इन्डोरसर, डिस होमकी ब्रान्ड सद्भाव दूत, मिस भुटान यूएसएकी आधिकारिक कोरियोग्राफर, मिस नेपाल क्यालिफोर्नियाकी आधिकारिक कोरियोग्राफर तथा विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालकी पूर्व युवा संरक्षण…
ग्लोबल रिच नेपालको आयोजनामा साउन १२ बाट इन्टर स्कुल ए–लेभल फुटसल टुर्नामेन्ट हुने भएको छ । उक्त फुटसल प्रतियोगितामा काठमाडौं उपत्यकाका १६ वटा ए–लेभल स्कुल सहभागी हुनेछन् । एकदिने उक्त प्रतियोगिता ढुकु फुटसल हव, बालुवाटारमा हुँदैछ । खेलकुद प्रतियोगिताले विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो कौशलता प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य र मनोबलमा प्रभाव पार्ने भएकाले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोजकले बताएको छ । प्रतियोगिता लिगकम नकआउटका आधारमा खेलाइनेछ । प्रतियोगीमा प्रथम हुनेले ट्रफी र प्रमाणपत्र पाउनेछन् भने दोस्रो हुनेले रनरअफ ट्रफी र प्रमाणपत्र पाउनेछन् । यो ग्लोबल रिच नेपालले आयोजना गरेको तेस्रो…
सरकारी वार्ता टोली र आमरण अनशनरत चिकित्सक डा गोविन्द केसी पक्षबीच अनौपचारिक वार्ता जारी रहे पनि डा केसी पक्षको अडानका कारण औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने अडान केसी पक्षले राखेका कारण वार्ता हुन नसकेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक खगराज बरालले बताउनुभयो । “हामीले उहाँहरुलाई निःशर्त वार्तामा आउन औपचारिक आग्रह गरेका छौँ तर केसी पक्षबाट वार्ताका लागि ठोस पहल भएको छैन”, सचिव बरालले भन्नुभयो, “वार्ताबाट निकास निकाल्न सरकार तयार छ तर संसद्मा पुगेको विधेयक फिर्ताको…
अनसनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा आइतबार काठमाडौंको वसन्तपुर डबलीमा करिव सयजना ‘सामुहिक अनसन’ मा बसे । सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सको अगुवाइमा बिहान १० बजे शंख बजाएर सुरू भएको सामुहिक अनसन साँझ ५ बजेसम्म चल्यो । सात घण्टे अनसनमा वकिल, र व्यापारीदेखि जग्गा कारोबारीसम्म सहभागी थिए । ४० को दशकमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको ‘सत्याग्रह’ कै ढाँचामा आयोजना गरिएको नागरिक समाजको सत्याग्रहमा युवा, विद्यार्थीहरु पनि उल्लेख्य सहभागी थिए । एक दिनका लागि सत्याग्रहमा बसेका उनीहरुले तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक सदनमा पेस गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । डा. केसीको ज्यान जाने…
७७ अरबको यातायातका साधन आयात
नेपालमा वर्षेनी यातायात तथा यातायातका साधन आयात बढ्दै गएको पाइएको छ । व्यापार निकासी तथा प्रवर्द्धन केन्द्रका तथ्याङ्क अनुसार वर्षेनी अरबौँ रकमका यातायातका साधन तथा तिनका पार्टपुर्जा आयात हुने गरेको पाइएको हो । गएको आर्थिक वर्ष २०७४–०७५मा कुल ७७ अर्ब ८२ करोड २३ लाख रुपैयाँको यातायात तथा तिनका पार्टपुर्जा आयात भएको केन्द्रको तथ्याङ्क छ । गएको आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ महिनासम्मको अवधिमा यो परिमाणको यातायातको साधन आयात भएको हो । गएको आर्थिक वर्षमा यो आयात अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३–०७४को तुलनामा साढे ५ प्रतिशतले वृद्धि हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको त्यही…
चिकित्सक संघद्वारा कानूनमन्त्रीको राजीनामा माग
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले अध्ययनका लागि बंगलादेश जाने छात्राबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले राजीनामा माग गरेको छ । संघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कानून मन्त्री तामाङले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि बंगलादेश जाने नेपाली छात्रालाई लिएर अमानवीय र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राजीनामा माग गरेको हो । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि बंगलादेश गएका विद्यार्थी र अभिभावकलाई पर्न सक्ने असरप्रति मन्त्री तामाङले नैतिक जिम्मेवार लिई पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने संघले जनाएको छ । संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि बंगलादेश गएका नेपाली महिलामाथि…